समाचार - थप शक्ति चाहनुहुन्छ, तर छिटो? यो नयाँ चार्जिंग टेक GaN दाबी गर्छ कि यो डेलिभर गर्न सक्छ
थप शक्ति चाहनुहुन्छ, तर छिटो? यो नयाँ चार्जिंग टेक GaN दाबी गर्छ कि यो डेलिभर गर्न सक्छ
ठूला पावर ईंटहरू र बहुविध केबुलहरू वरिपरि लग्गिंगको दिन तपाईंको उपकरणहरूलाई टिक्का राख्नको लागि अन्त्यमा हुन सक्छ। तपाईंको स्मार्टफोन वा ल्यापटप चार्ज हुनको लागि कुर्नु घण्टा, वा एक डरलाग्दो तातो चार्जर द्वारा चकित हुनु, विगतको कुरा पनि हुन सक्छ। GaN टेक्नोलोजी यहाँ छ र यसले सबै कुरा अझ राम्रो गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ
"सिलिकॉन दक्षता र शक्ति स्तरको हिसाबले आफ्नो सीमामा पुगेको छ," ग्राहम रोबर्टसन, डिजिटल प्रवृत्तलाई भने। "त्यसोभए, हामीले गाएन टेक्नोलोजी थियौं, जुन तत्व 31१ र तत्व combined लाई मिसाएर ग्यालियम नाइट्राइड बनाउँदछौं।"
"सिलिकॉन दक्षता र उर्जा स्तरको हिसाबले यसको सीमामा पुगेको छ।"
GaNFast को "GaN" खण्ड gallium nitride को अर्थ हो, र "द्रुत" भागले अधिक चार्ज गति बुझाउँछ। Navitas अर्धचालकहरूले यो सामग्री यसको पावर आईसी (शक्ति व्यवस्थापन एकीकृत सर्किट) मा प्रयोग गर्दैछ, जुन यसले चार्जर निर्माताहरूलाई बेच्छ।
"हामीले परम्परागत सिलिकॉन वेफरमा तह राख्यौं र त्यसले काम तीव्र गति, अधिक दक्षता, र उच्च घनत्वको साथ नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ," रॉबर्टसनले भने।
पावरले पहिलो दिनबाट पोर्टेबल इलेक्ट्रोनिक्सको लागि टाउको दुखाएको छ। टेक संसारमा द्रुत गतिको नवीनताको बावजुद हामी २ we बर्षदेखि उस्तै लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू प्रयोग गर्दैछौं, उनीहरूका सबै सीमितताहरूको साथ। यसको मतलब हाम्रो प्राय: पोर्टेबल ग्याजेटहरू मुश्किलले प्लग ईन बिना एक दिन जान सक्छ।
जहाँ हामीले भर्खरका वर्षहरूमा धेरै नवीनताहरू देख्यौं छिटो चार्ज वेगमा छ, तर परम्परागत चार्जरहरूको साथ धेरै शक्ति प्रदान गर्दा उनीहरू आकारको हुनु आवश्यक छ र धेरै तातो उत्पादन गर्दछ, जुन बिजुली बर्बाद हो। नवितासका अनुसार गानफास्ट पावर आईसीहरूले higher.० उच्च पावर घनत्व, percent० प्रतिशत बढी ऊर्जा बचत, र २० प्रतिशत कम प्रणाली लागत प्रस्ताव गर्दछ।
तिनीहरू क्वालकॉमको क्विक चार्ज specific.० स्पेसिफिकेसनसँग पनि उपयुक्त छन, जुन अहिल्यै एक दुर्लभता हो, र स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफको पाँच घण्टाको चार्जिंगको पाँच मिनेट मात्र बराबर हुनुपर्दछ। GaNFast पावर डेलिभरी स्पेसिफिकेसनको साथ काम गर्दछ, जुन गुगलको पिक्सेल like जस्ता मानक फोनहरू र डेलको XPS १ like जस्ता ल्यापटपहरूमा निर्भर छन्। जहाँसम्म, यसले ध्यान दिन लायक छ कि पोर्टले क्युसी 4.0.० वा पीडी प्रस्ताव गर्न सक्दछ, दुबैले त्यो यूएसबी-सी पीडी विनिर्देश तोड्दैन।
पोष्ट समय: अक्टूबर १ 14-२०२०